Toca Kitchen 2: miverina ao an-dakozia ny ankizy | Vaovao IPhone
Eo anelanelako sy i Luis mpiara-miasa amiko, samy manan-janaka kely izahay, dia afaka milaza fa manana ny katalaogan'ny developer Toca Boca avokoa izahay. Ireo lalao ho an'ny ankizy ireo dia natao manokana ho an'ny kely indrindra amin'ny trano, tsy manana karazana dokam-barotra (saika karama daholo) vitany ny mampiala voly ireo ankizy kely ao an-trano mampianatra rehefa miala voly. Ohatra vitsivitsy no hita ao amin'ny Pet Doctor (biby fiompy biby), Toca Band (hamorona mozika), Toca Boo (hamely ny tahotra) na Toca Train (mitondra fiara mpandeha sy lamasinina mpitatitra entana).
Androany isika dia hiresaka momba ny Toca Kitchen 2, andiany faharoa amin'ny lalao fandrahoan-tsakafo Toca Kitchen izay nanampiana azy ireo fitaovana vaovao, vokatra fandrahoana sakafo ary ny fahaizana mamorona lovia combo. Eny, toy ny trano fisakafoanana. Ity fanavaozana farany ity dia hahatonga ny zaza ho lasa chef za-draharaha ary afaka mamorona karazan-tsakafo mahandro sakafo ho an'ireo vahiny telo vonona ny hanandrana izay lovia atolotray.
Ny zanatsika dia ho afaka manapaka, manalefaka, manendasa, mandraho ary manendy ny Sora-tanana 16 no misy ary asio zava-manitra ho azy ireo hanome azy ireo fifandraisana manokana. Izay mitambatra ao an-tsaina dia azo atao ao amin'ny Toca Kitchen 2, manomboka amin'ny steak misy ranom-boanio ka hatramin'ny sardine misy ovy natsatsika. Mba hamoronana ireo lovia natambatra dia tsy maintsy mahandro ny akora misaraka isika ary apetraka eo ambanin'ny efijery, samy ao anaty lovia samy hafa. Ny takelaka combo dia vita rehefa atolotray ny vahiny.
Toy ny lalao Toca Boca rehetra, Toca Kitchen 2 Izy io dia manana interface interface intuitive mba hahafahan'ny ankizy kely mankafy ny tenany fa tsy mila ny fanampiantsika ary tsy manana fividianana fampiharana.
Kitiho ny lakozia 2€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Toca Kitchen 2: miverina any an-dakozia ny ankizy
dahiana torres madrigal peres patiño dia hoy izy:
Tiako io lalao io ary mpankafy an'i Fernanflo aho ary ianao no tiako ity lalao ity tiako ity lalao ity izay nohirihako hatramin'ny fotoana voalohany nandehanako nitomany aho wow zazalahy aber ahoana no fomba fampidiran-dalao an'io lalao io Tsy afaka miteny bebe kokoa aho fa tianao ny bye bye bye bye lin pinguin
Valio i dahiana torres madrigal peres patiño
Tsy afaka milalao ny lalao fotsiny aho
Sans dia hoy izy:
Valiny amin'i Sans
Mamelà ny helokao
Stormy, fampiharana tsara hametrahana bitsika marobe misesy
LockSmoother +: tweak hanamboarana ny Lock Screen anao amin'ny fomba kanto